इथियोपियामा अपराधविरोधी अभियानलाई साथ दिएको आरोपमा कम्तीमा एक दर्जनभन्दा बढी पत्रकार पक्राउ परेका सञ्चारकर्मी तथा अधिकारकर्मी समूहले शुक्रबार बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेर्दै आएको उक्त धरपकडमा अपराध विरोधी अभियानमा सम्लग्न चार हजारभन्दा बढी मानिसहरूलाई पक्राउ गरी कडा सुरक्षा नियन्त्रणमा राखेको पत्रकार तथा अधिकार समूहहरूले बताएका छन् ।
पछिल्लो समय अभियानबारे समाचार लेखेको आरोपमा पत्रकारहरूलाई पनि निसाना बनाइएको रिपोर्ट गरिएको छ ।
हालैको गिरफ्तारीमा अम्हारिक भाषाको पत्रिका ‘फितिह’ का प्रधान सम्पादक टेमेस्जेन डेसालेगन पनि पर्नुभएको छ । उहाँलाई बिहीबार बिहान आफ्नो कार्यालयबाट सादा पोषाकमा आएका सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेका उनका सहकर्मी मिस्गन जिनाबुले एएफपीलाई बताए ।
“सुरुमा त उनीहरूले टेमेजनलाई स्थानीय प्रहरी चौकीमा लगे । सुरक्षा बलले उहाँलाई पछि गोप्य स्थानमा सारेको छ ।” उनलाई कहाँ राखिएको भन्नेबारे कुनै जानकारी आएको छैन ।
प्रहरीले बिहीबार टेमेस्जेनको घरमा पनि आक्रमण गरेका पत्रिका, डिस्क ड्राइभ र क्यामेरा जफत गरेका बताइएको छ ।
वर्षाैंदेखि पानीको हाहाकार भोगिरहेको गाउँमा नहरबाट पानी आएपछि को खुशी नहोला ? भारतको गुजरातस्थित कच्छको मांडवीमा नहरबाट पानी आउँदा स्थानीयले बाजागाजासहित खुशीयाली मनाए । नर्मदा जिल्लामा ४०० किलोमिटर ल...
बोरिस जोनसनले दिए राजीनामा
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले आफ्नो दलको प्रमुखबाट बिहीवार राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय डाउनिङ स्ट्रीटमा सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी प्रमुखबाट राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहने ...
भारतको पञ्जाबका मुख्यमन्त्री भगवंत मानले आफूभन्दा १६ वर्ष कान्छी युवतीसँग दोस्रो बिहे गरेका छन् । बिहीवार मुख्यमन्त्री मान र डा. गुरप्रीत कौरबीच विवाह भएको छ । यसअघि मानकी पहिलो पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद ...
पाकिस्तानमा अत्यधिक बर्षाका कारण १५ को मृत्यु
पाकिस्तानमा अत्यधिक बर्षाका कारण १५ जनाको मृत्यु भएको छ । देशको बालुचिस्तान र गिल्गित बाल्तिस्तानमा पछिल्लो ४८ घण्टामा उनीहरूको मृत्यु भएको अधिकारीले जनाएका छन् । मृत्यु भएकामध्ये १० जनाको बालुचिस्तानमा ...
श्रीलङ्काले मुद्रास्फीतिको सामना गर्न प्रमुख दरलाई २१ वर्षकै उच्च पुर्‍यायो
श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक बोर्डले ‘स्टान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी रेट (एसडीएफआर)’ र ‘स्टान्डिङ लेन्डिङ फेसिलिटी रेट (एसएल एफआर) दरलाई क्रमशः १०० आधार बिन्दुले बढाएर १४.५० प्रतिशत र १५.५०...
सवारी दुर्घटनामा परी इजिप्टमा ८ को मृत्यु, ४४ घाइते
सवारी दुर्घटनामा परी इजिप्टमा कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ । बिहीबार भएको घटनाका कारण अरु ४४ जना घाइते भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराइएको छ । उनीहरूमध्ये केहीको...